Dowladda Hindiya Oo Bandow Kusoo Rogtay Gobalka Kashmiir. – Calamada.com
Dowladda Hindiya Oo Bandow Kusoo Rogtay Gobalka Kashmiir.
calamada August 6, 2019 2 min read
Dowladda Gaalada Hindiya ayaa sare u qaadday cadaadiska ay saarayso dadka Muslimiinta ee ku dhaqan gobolka Kashmiir oo ay gummeysi ku heysato ku dhowaad 80 sanadood.
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Hindiya ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba gobolka Jaamuu oo ah qeybta ay Hindiya ka heysto Kashmiir lagu biiriyay gobollada kale ee Hindiya taas oo ka dhigan in si rasmi ah uu cadowgu u ixtilaalay mandiqadda uuna ku darsaday dalkiisa.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda gaalada Hindiya ninka lagu magacaabo Amiit Shaah ayaa baarlamaanka Federaaliga ah ka hor sheegay in lalaalay oo la joojiyay maadada 37-aad ee dastuurka wadankaas oo dhigaysay in si gaar ah loo maamulo gobolka Kashmiir.
Hindiya waxay sheegtay in dadka muslimiinta ee gobolkan kunool lagu dhaqi doono qaanuunka guud ee dalka kajira, wararka ayaa intaas ku daraya in madaxweynaha Hindiya uu durbadiiba ansixiyay isbedelladan dhanka maamulka ah ee looga dhawaaqay gobolka Kashmiir.
Tallaabadan ayaa u ogolaanaysa dadka Hinduuska iyo kirishtaanka ah in ay deegaameysi ku sameeyaan dhulalka muslimiinta ayna ka dhistaan macaabid iyo kaniisado dheeraad ah, sidoo kale go’aankan cusub ayaa ciriiri dhan walba ah sii gelinaya dadka muslimiinta ah ee markii horaba gummeysiga kujiray.
Tobanaan kun oo kamid ah ciidamada Melleteriga Hindiya ayaa loo daad gureeyay gobolka Kashmiir ee ixtilaalka kujira waxaana jaray dhammaan isgaarsiinta taleefannada, afhayeen u hadlay dowladda gaaladaHindiya wuxuu sheegay in ay xaalad feejignaan ah kujiraan ayna ka baqayaan weeraro uga yimaad jamaacaadka jihaadiga ah.
Waa markii ugu horraysay oo 70 sanadood kadib ay dowladda Hindiya iclaamiso in gobolka Kashmiir ay umaamulayso sida dhul ay iyadu leedahay halka markii hore ay si khaas ah ugumeysanaysay muslimiinta
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 05-12-1440 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo-05-12-1440 Hijri.